July 6, 2019 Internet Khabar
वि.सं. २०७६ असार २१, शनिबार तदनुसार इ.स. २०१९ जुलाई ६, आषाढ शुक्लपक्ष। चतुर्थी,आज शनिबार बुढानिलकण्ठको दर्शन गरि भेटी स्वरुप सेयर गर्दै आफ्नो राशिफल हेर्नुहोला । तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।
काममा विभिन्न अवसर पाइनेछ । समयमा सहि निर्णय लिन सक्ने क्षमताले अगाडी बढ्न मद्दत पुग्नेछ । अरुले आफ्ना कमजोरीप्रति गुनासो गर्न सक्छन ।शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ । भाग्यले साथ दिनेछ। मेहनत तथा योग्यता अनुसारको फल प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थीहरुका लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ । काममा परिवारको सहयोग प्राप्त हुनेछ । सामाजिक मानसम्मान र प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम लिन सकिने छ ।
रमाइलो जमघटमा सहभागी बन्ने अवसर जुट्न सक्छ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन । गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ ।काममा सफलता मिल्नेछ । मतभेद पैदा हुन सक्छ । स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ ।आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै विदेश जाने योग रहेको छ । अरूकै कामको जिम्मेवारी समेत बढिरहनेछ । काममा सजिलै सफलता मिल्नेछ ।
व्यापार ब्यबसायमा प्रशस्त फाइदा हुने योग रहेकोछ । परिवारको सहयोगबाट विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ । साथीभाईसंग रमाइलोमा समय बित्नेछ ।मान सम्मान बढ्नेछ । परिवारको साथ र माया पाइनेछ । धन लाभ हुनेछ । आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ । आफन्तको सहयोगले महत्वपूर्ण कामको थालनी हुनेछ । प्रयत्न गर्दा सहयोगीका माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ ।स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । भेटघाटमा समय बित्नेछ । बिश्वास गरेकाले साथ दिनेछन । रोकिएका कामहरु सुचारु हुनेछन ।
काममा परिवारको सहयोग प्राप्त हुनेछ । सामाजिक मानसम्मान र प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम लिन सकिने छ ।योजनाहरु सफल हुनेछन् । घर परिवारको सहयोग प्राप्त हुनेछ । कामकाजमा आशा अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । धार्मिक कामले आत्मविश्वास बढ्नेछ ।स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । भेटघाटमा समय बित्नेछ । बिश्वास गरेकाले साथ दिनेछन । रोकिएका कामहरु सुचारु हुनेछन ।
आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै विदेश जाने योग रहेको छ । अरूकै कामको जिम्मेवारी समेत बढिरहनेछ । काममा सजिलै सफलता मिल्नेछ ।शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । प्रतियोगितामा राम्रो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनु पर्नेछ । आफूले गल्ती नगरेको कुरामा आरोप लाग्न सक्ने हुनाले जुनसुकै काम गर्दा पनि विचार पुर्याउनु राम्रो हुनेछ ।श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग रहेको छ । पढाइ लेखाईमा प्रगति हुनेछ । आयआर्जन बढ्ने समय छ ।
श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग रहेको छ । पढाइ लेखाईमा प्रगति हुनेछ । आयआर्जन बढ्ने समय छ ।आफन्तको सहयोगले महत्वपूर्ण कामको थालनी हुनेछ । प्रयत्न गर्दा सहयोगीका माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ ।भाग्यले साथ दिनेछ । स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्नेछ । आलस्यता बढ्नेछ ।सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व हातलागी हुनेछ । परिवार र आफन्तको सहयोगबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ । व्यापार ब्यबसायमा फाइदा हुनेछ ।
स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । भेटघाटमा समय बित्नेछ । बिश्वास गरेकाले साथ दिनेछन । रोकिएका कामहरु सुचारु हुनेछन ।जिम्मेवारीबोध हुनेछ । आमाको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्तित भइनेछ । परिवार तथा साथीहरुको सहयोग प्राप्त हुनेछ । समाजमा मानसम्मान र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व हातलागी हुनेछ । परिवार र आफन्तको सहयोगबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ । व्यापार ब्यबसायमा फाइदा हुनेछ ।परिवारमा समस्या आउनेछ । काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । मान्यजनको आशिर्वाद प्राप्त हुनेछ । आजको लागि शुभ अंक ३ रहेको छ । पढाई लेखाइमा प्रगति हुनेछ । आस मारेको कामले उत्साह जगाउनेछ । तत्काल लाभ नभए पनि विभिन्न सकारात्मक संकेतहरू प्राप्त हुनेछन ।
समाजमा मानसम्मान र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ ।शरीरमा नयाँ जोश जाँगर उत्पन्न हुनेछ । कार्य सफल हुनेछ । साथीहरुले आवश्यक सहयोग गर्नेछन् । आफ्नो चलाखीले महत्वपूर्ण काम सम्पन्न हुनेछन् । काममा विभिन्न अवसर पाइनेछ । समयमा सहि निर्णय लिन सक्ने क्षमताले अगाडी बढ्न मद्दत पुग्नेछ । अरुले आफ्ना कमजोरीप्रति गुनासो गर्न सक्छन ।
साथीभाईको सहयोगले महत्वपूर्ण कामहरु सफल हुनेछन । व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ । हिम्मतले काम लिन सकिनेछ ।पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो रहनेछ । रोकिएको काम पूरा हुनेछ । निलो रंगबाट आज टाढा रहनु नै राम्रो हुनेछ ।रमाइलो जमघटमा सहभागी बन्ने अवसर जुट्न सक्छ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन । गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ ।
पढाई लेखाइमा प्रगति हुनेछ । आस मारेको कामले उत्साह जगाउनेछ । तत्काल लाभ नभए पनि विभिन्न सकारात्मक संकेतहरू प्राप्त हुनेछन ।नयाँ योजनाहरु बन्नेछन् । परिवारबाट सहयोग मिल्नेछ । आजको लागि शुभ रङ्ग पहेंलो रङ्ग रहेको छ ।व्यापार ब्यबसायमा प्रशस्त फाइदा हुने योग रहेकोछ । परिवारको सहयोगबाट विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ । साथीभाईसंग रमाइलोमा समय बित्नेछ ।
रसियाली विमान अवतरणको क्रममा दुर्घटना, सवै यात्रु जीवितै, १६ जना गम्भीर घाइते
आज माघे सक्रान्ति पर्व, देवघाटमा भक्तजनको घुइँचो